Kwụsị minglọ ọrụ Shams na-akwụ ụgwọ na Social Media na Ahịa Ọdịnaya | Martech Zone
Anọ m na-ekiri ụkpụrụ na afọ gara aga nke m kwenyere na ọ na-akpaghasị… mmejọ nke ụlọ ọrụ site n'aka ndị isi a na-akwanyere ùgwù na ụlọ ọrụ ahịa mgbe ha kpebiri ịbelata ma ọ bụ gbanwee usoro mgbasa ozi ha ma ọ bụ atụmatụ ha.
Ana m eme ka ike gwụ m n'eziokwu.
Nke a bụ mmelite Twitter na nso nso a site na LUSH UK nke na-arụ ọrụ dị egwu nke ịkọwa ihe ịma aka ha dị ka azụmahịa na otu ha ga-esi zaghachi ya. Biko pịa site na ma gụọ usoro mmelite niile.
Anyị na-agbanwe mmadụ.
Na-arịwanye elu, mgbasa ozi mmekọrịta na-eme ka o sikwuoro anyị ike ịgwa ibe anyị okwu ozugbo. Ike gwụrụ anyị na algọridim na-alụ ọgụ, anyị achọghị ịkwụ ụgwọ ịpụta na akwụkwọ akụkọ gị. pic.twitter.com/nJUzG0lham
Akwụsịla ebe ahụ. Guo dum, echiche echiche. Mgbe ahụ gụọ otú ahịa isi na-aza. Echere m na nkatọ ha na nzaghachi na-adịghị mma abụghị naanị ndị na-enweghị isi, ha bụ ndị na-eleghara anya.
Ndị mgbasa ozi mgbasa ozi na ndị ahịa ọdịnaya ere mgbasa ozi na ọdịnaya. Ọ dị mma maka ha, mana nke ahụ apụtaghị na atụmatụ ha na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Ọ bụghị.
Ọ dịka a ga - asị na mgbasa ozi mmekọrịta na ịre ahịa ọdịnaya bụ mmanụ CBD nke ụlọ ọrụ ahịa… ihe ngwọta maka ọrịa ọ bụla na - emetụta azụmahịa gị. Ha abụghị.
Abụ m Jehova CMO maka ụgwọ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Arụrụ m ọrụ na onye ọ bụla site na GoDaddy, Dell, na Chase gbadara ndị na-elekọta pest na mpaghara ụlọ ọrụ. Maka ụfọdụ ụlọ ọrụ, usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya siri ike nke mere ka akụ na ụba ya sie ike. Nloghachi nke ego maka mmata na-eto eto ma na-ekwurịta okwu na oke mmadụ ma ọ bụ obodo ha nwere dị egwu.
Mana nke ahụ abụghị ụlọ ọrụ ọ bụla.
Nke a bụ ihe ijuanya maka gị. Abụ m otu n’ime ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Ọdịnaya na usoro mmekọrịta mmadụ na ibe m na-enyere m aka ịnọgide na ụlọ ọrụ m. Nghọta na mmata na-enyere azụmahịa m aka, mana anaghị ewepụta ego karịa oge na mmefu nke imepụta ọdịnaya na mgbasa ozi mmekọrịta. Heck, ị gaghị enwe ike ihu vidiyo site na m ọzọ. Ee ee… ị nwere ike ịkatọ ọnụnọ m n'ịntanetị ụbọchị niile… wee chọta ụda nke enwere ike ịme ka mma ma ọ bụ mee nke ọma.
Ma mgbe afọ 11 na azụmahịa, M ga-agwa gị nke a… M nwere ike ikwu okwu na ihe omume ọ bụla, na-na ahịa ọ bụla ndepụta, ozi ọma jaak ọ bụla na-elekọta mmadụ media iwe, na-ede abụọ ịtụnanya blog posts a ụbọchị… na ọ na-adịghị ọbụna-abịa na-eme ka ego m nweta nweta netwọk na okwu onu. Emefuola m ego, mgbalị, na oge mụ na ndị mmadụ nọ n’ụlọ ọrụ m iji hazie, mepee ma mepụta ọdịnaya dị ịtụnanya yana - ka ọ dọtara m, ọ kwụghị ụgwọ ahụ. Enweela m ndị na-emepụta oge, ndị na-ede akwụkwọ, ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta, na ndị na-ese vidio na-arụ ọrụ dị egwu maka m. Ọ naghị arụ ọrụ. Oge.
Ihe Na Arụ M
The pụta na m nwere ike iru m ahịa, na àgwà nke mmepụta nke ọrụ, ndị uru nke na-arụ ọrụ ahụ, na okwu ọnụ ha na-enye m azụmahịa emewo ka ọ bụla nnukwu nkwekọrịta nke azụmahịa m nwere.
Ọ dịghị ihe ọzọ na-abịaru nso. Onweghị ihe.
Yabụ, maka ọtụtụ ndị ahịa m, a dụọla m ọdụ itinye ego na mgbasa ozi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nke ahụ ziri ezi… M kwuru ya.
M nwere a na-eto eto mmalite na-erute beauticians. Maa amụma? Ndị na-achọ mma nọ n’ụkwụ ha ụbọchị niile na-achọ ịchụ ego. Ha anaghị agụ akụkọ ma ọ bụ mmelite mgbasa ozi mmekọrịta… ha na-arụ ọrụ ha. Agbanyeghị, ndị ọmarịcha ihe ịchọ mma ahụ ga-ewepụta oge iji gaa nzukọ iji hụ teknụzụ kachasị ọhụrụ. Anyị na-agwa ha okwu site na mụ na ha imefu ego wee gwa ha ka ha mee nzukọ karịa! Ọ rụkwara ọrụ.
Ndị ọrụ m dị na mpaghara na-arụ ọrụ nke ọma site na ịbịakwute ndị ahịa na ịrịọ maka ọkwa na nyocha karịa itinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta na ịkwanye ọdịnaya. Yabụ, anyị wuru njedebe Ọbá akwụkwọ ọdịnaya dabere na oge oge ma anyị na-aga n'ihu ịkwalite edemede ha nke edoziri ma degharịa site na blọgụ ha na mgbasa ozi mmekọrịta. Ahụrụ m na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ maka ụlọ ọrụ abụọ anyị mere nke a site na okporo ụzọ njin ọchụchọ. Enweghị ọdịnaya ọhụụ, enweghị mgbasa ozi mgbasa ozi oge niile… naanị usoro ntọala dị irè nke ndụmọdụ na mbọ ọ bụla na-aga ọrụ ndị ahịa na njikọ aka onwe onye.
Enwere m ụlọ ọrụ ọzọ na-elele mmelite ihu igwe, mgbe ahụ, canvasses agbata obi na-emetụta oke mmiri ozuzo iji nyocha n'efu. You maara ihe na-arụ ọrụ karịa ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ahịa ọdịnaya maka ha? Orzọ hangars. Nnukwu nloghachi na itinye ego.
Enwere m mmalite teknụzụ ọhụụ nke agụụ na-agụ maka akụrụngwa yana enweghị ụzọ m ga-esi eti ndị asọmpi buru ibu n'ahịa ha na-emefu ọtụtụ nde mmadụ ma nwee ìgwè mmadụ. Kama ịhapụ oge iji mepụta ọdịnaya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, anyị na-etinye otu ọnwa… mgbe ụfọdụ karịa… n'ịmepụta na ịkwalite otu ọdịnaya. Maa amụma? Ọ na-arụ ọrụ. Ekekọrịtala ọdịnaya ahụ wee chọta ya karịa MQL karịa atụmatụ ọ bụla.
Enwere m ụlọ ọrụ teknụzụ nwere ihe ịga nke ọma nke amatara n'ụwa niile onye ndu na ụlọ ọrụ ha maka ihe ọhụrụ. Anyị rụsiri ọrụ ike na ọdịnaya dị egwu nke ekesara otu tan na ụlọ ọrụ ahụ. Know maara ihe rụrụ nke ọma? Broshọ zigara ya ndị isi. N'ihi gịnị? N'ihi na mgbe ndị ọrụ ha na-eme nyocha n'ịntanetị ma mara banyere ụlọ ọrụ ahụ, ha na ndị ọrụ na ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ka ha wee ghara ịnata ozi ahụ n'ihu ndị na-eme mkpebi ha. Anyị gafere isi ha ma ọ rụọ ọrụ.
Enwere m ụlọ ọrụ ọzọ nwere nke enweghị mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụ ọdịnaya ya n'ịntanetị. Kama nke ahụ, ha na-etinye nnukwu ego na ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa na ndị ọrụ nkwado ma na-arụ ọrụ na ha dị ịtụnanya. Ọ bụghị oke iche na Zappos or Apple… Ha na-eme ka a ahịa ahụmahụ na-eju anya na ndị ahịa na-ha ahịa na-akwado. You na-amịkpọ ndị ụlọ ọrụ?
Arụrụ m ọrụ na ụlọ ọrụ na-achịkwa nke ọma nke enweghị ike ịbịaru nso ịkekọrịta ọdịnaya n'ịntanetị banyere ụlọ ọrụ ha, teknụzụ ha, ma ọ bụ ndị ahịa ha. Oge. A manyere anyị iji atụmatụ ndị ọzọ iji mee ka ị mata, nnweta, na njigide. Maka otu onye ahịa, anyị mepụtara ngwa mkpanaka nke ga-enyere ndị ọrụ nyocha ha aka ịgbakọ na ntụgharị siri ike na ntụgharị. Ọ rụrụ ọrụ mara mma.
Ahụla m ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka teknụzụ ndị Forrester na Gartner kwuru na ha na-enweta ndu ndị ọzọ ma mechie karịa afọ dum nke mmepụta mmekọrịta mmadụ na ọdịnaya. M na-aghọta na nke ahụ ka ọdịnaya… ma ka na-eche ihu ya… ya ukwuu n'ime ewu a aha na mmekọrịta mmekọrịta na ga-ị na ụdị aha. Akpọrọ m asị na m ga-agbasa ozi ọma ahụ, mana ọ bụghị ndị nyocha niile na-echere gị tweet ma ọ bụ post blog ọzọ.
Enwere m ụlọ ọrụ ọzọ na-eme ka azụmahịa ha dị okpukpu abụọ na ebe nrụọrụ weebụ jọgburu onwe ya, enweghị nchọta ọchụchọ, enweghị ọdịnaya, na enweghị usoro mgbasa ozi mmekọrịta - ị ga-agbanye ume na Ha na - enweta ndu site na ụlọ ọrụ ibe, oyi na - akpọ atụmanya, yana azụmahịa dị nso. Otu n'ime ndị ahịa na-apụ apụ na-arụ ọrụ ebe ahụ mechiri $ 8 nde na azụmahịa n'afọ gara aga. Gbanyụọ oku oyi.
Tupu ị tụfuo m ọdụm, n'ezie anaghị m ekwu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya agaghị ọrụ… ma ha abụghị ndị a otu kacha dabaa ngwọta.
Mmefu ego, usoro iheomume, asọmpi, oge, akụrụngwa, ụlọ ọrụ… ihe ndị a niile kwesịrị ịtụle maka ma mgbasa ozi mmekọrịta na atụmatụ ọdịnaya dị mma maka azụmaahịa gị.
Ana m ahụ ọtụtụ azụmaahịa na-agbanwe ihe ntanetị sitere na mgbasa ozi mmekọrịta na ọrụ ndị ahịa, site na imepụta ọdịnaya gaa nzukọ, nkwado, ịmanye ahịa, na usoro ndị ọzọ. Ọ bụ ọrụ ha na-arụ ihe ha tụrụ ma hụ ọrụ.
Ọ bụghị azụmahịa niile nwere ike imeri mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ dee ọdịnaya dị ịtụnanya. Kwụsị ụlọ ọrụ ndị na-eme ihere mgbe ha kwagara atụmatụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma maka ha.
Ikekwe, ihe na-ewute m bụ na ndị mbụ na-emechu azụmahịa ndị a ihu bụ ndị mmadụ n'ire usoro mgbasa ozi na usoro ihe omuma na enweghi ihe omuma banyere ulo oru na otu o si aru oru. Nke ahụ bụ enweghị isi… na-awakpo onye ọ bụla nke na-emegide ụzọ ahụ ị kpata ego.
Kama ịme ụlọ ọrụ na-eme ihere, gaa chọta ụlọ ọrụ ndị ị nwere ike ree ọrụ gị na nke chọrọ enyemaka gị ma nwee ike ime mgbanwe.
Nke ahụ abụghị onye ọ bụla.
Kwụsị ụlọ ọrụ ndị na-eme ihere.